प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने, अनि दशगजामा सुत्ने ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने, अनि दशगजामा सुत्ने ?
प्रकाशित मिति : २०७७, ७ बैशाख आईतवार २०:४८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय संयन्त्र गठनको माग औचित्यहीन भएको बताएका छन् । नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी संचारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले यो लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै भएको र यस्ता कुराहरुको कुनै अर्थ भएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन् । नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ, अनि कुन नागरिक राख्ने वा छुटाउने ? त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऊँ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ ।’उनले संयन्त्र गठनको माग गर्नेहरुलाई आफूलाई विश्वमा कुन देशमा त्यस्तो संयन्त्र गठन भएको देखाइदिन आग्रह गरे ।
उनले प्रश्न गरे, ‘नेपालको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेशप्राप्त सरकार हो । सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आम जनताको समर्थन र सहकार्य छ, किन चाहियो संयन्त्र ?’
उनले भारतबाट सीमामा आएर बस्ने नेपालीहरुप्रति आक्रोश पोखेका छन् । भारत सरकारले होटलमा राख्छौं भन्दा नबस्ने अनि दशगजामा आएर खानबस्न पाइएन भन्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले भने, ‘स्वदेश आउन पाउनुपर्छ । तर देशभक्ति उम्लिने कतिबेला ? हामी उहाँहरुलाई कोरोनारहित अवस्थामा स्वदेश फर्काउन चाहन्छौँ । के सङ्क्रमितलाई धमाधम ल्याएर गाउँगाउँ पठाएर अरु मान्छे सोत्तर बनाउनुपर्छ भन्ने हो ? हामीले सीमामा अलपत्र परेकालाई इच्छाअनुसार होटलमा वा क्वारेन्टाइन राख्न भनेका छौँ । केही मानिस होटलमा नबस्ने, क्वारेन्टाइनमा नजाने अनि दशगजामा सुत्ने गरेको पनि पाइयो । नेपालीलाई पारि पनि खानबस्न व्यवस्थाका लागि हामी सम्बन्धित सरकारसँग कुरा भएको छ । अनि जसरी पनि आउनुपर्ने ? हामी भारतको सङ्क्रमणको स्थिति हेरेर मात्रै सीमा खुलाउँछौँ । सुदूरपश्चिमलाई कोरोनाको इपिसेन्टर हुन दिँदैनौँ । यस्तो बेलामा संविधानको किताब हेरेर हिँडडुलको अधिकार खोज्ने होइन, कोरोनाबाट बच्ने हो । ’
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका मुद्दालाई यो सरकारले छानबिन र कारवाही गरेको हुँदा यही सरकारले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ढङ्गले कुप्रचार गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरण विगतमै भएको हो । हामीले चाँजबुझ अघि बढायौँ । वाइडबडी प्रकरणको कुरा पहिल्यै शुरु भएको हो । ३८ केजी सुन प्रकरणमा हाल करिब ७३ जना कारागारमा छन् । धेरैलाई मुद्दा लागेको बताउँदै २२–२४ जनालाई जिउँदै पोल्ने पनि पहिले सांसद भएर बसेका थिए । तिनीहरु छानबिन आएपछि शासन सुव्यवस्था नभएको र भ्रष्टाचार भएको भनी आरोप लगाइएको छ । तर सबै अनियमितता एकै पटक नरोकिन सक्छन् । सुशासन लामो यात्रा हो ।’
भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिका बोडेमा हरेक नयाँ वर्षको वैशाख २ गते मनाइने